wararkii ugu dambeeyay ee Dagaal ka socda Gudaha Kismaayo. | XAL DOON
Home NEWS wararkii ugu dambeeyay ee Dagaal ka socda Gudaha Kismaayo.
wararkii ugu dambeeyay ee Dagaal ka socda Gudaha Kismaayo.
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya inuu ka socdo Iska hor imaad u dhaxeeya Ciidamada Jubbaland iyo ciidan taabacsan C/naasir Seeraar oo ka mid ahaa Golihii Is bedel doonka Jubbaland.
Sida wararku sheegayaan iska hor imaadka ayaa yimid xilli maanta ammaanka magaalada Kismaayo si aad ah loo adkeeyay, iyada uu booqasho ku tagayay Safiirka Mareykanka Donald Yamamoto.
Wararka ayaa sheegaya in iska hor imaadka uu ka dhashay waddo ay xireen Ciidamada Amniga Kismaayo, waxaa la sheegayaa in xiritaanka wadada uu sabab u yahay isku dhaca labada dhinac.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in is rasaaseynta ka socotay dhanka guriga uu degan yahay C/naasir Seeraar oo ka mid ahaa Mas’uuliyiintii hore ee Jubbaland ciidamo ilaalo ahna ku jeysto halka uu degan yahay.
Dhinaca kale waxaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku sugan oo kulan uga socdaa Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo wafdi uu hoggaaminayo Safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto oo maanta booqasho ku tagay Kismaayo.
Guddigii loo saaray khilaafka Muqdisho & Nairobi oo warbixinadooda soo gabagabeeyay!
Xukuumadda oo beenisay in ciidan Soomaaliyeed ka dagaal galeen Tigray
Dibadbaxyo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo iyo Taliye Fahad oo ka socda Gaalkacyo.
Wasiirka Amniga Galmudug oo iclaamiyay duulaan ka dhan ah Shabaab.